कुमार भट्टराइको अश्वत्थामा बिमोचन, मान्यताहरु भत्काउने प्रयास – तहल्काखबर
२०७६ असार ७ १२:२३ June 23, 2019 तहल्का खबर
बिर्तामोड / शनिबार, बिदाको दिन । दैनिक कार्यालयीय कामकाज भन्दा फरक हुन्छ यो दिन । अरु दिन जस्तो अफिसियल कामले गाँजेको हुन्न शनिबार ।
त्यसमाथि झापामा अत्याधिक गर्मी । एउटा कार्यक्रम चलिरहेको थियो । सबै फुर्सदिला भएर होला कार्यक्रममा खचाखच मान्छे । म अलिक ढिलो पुगेँ । जब म हलमा प्रवेश गरेँ ।
कार्यक्रम अघि नै सुरु भइसकेको रहेछ । संकोच मान्दै पछिल्तिरको खाली कुर्सी तानेर बसेँ । कार्यक्रममा सहभागीको भित्रिने र बाहिरिने क्रम जारी नै थियो । छेउको साथीलाई सुटुक्कै सोधेँ । कार्यक्रम सकिन लाग्या हो ! होइन भर्खरै सुरु भएको हो, उनले जवाफ दिए । म ढुक्क भएँ ।
मञ्चमा तीन जना अतिथि थिए । उनीहरुको हात हातमा थियो एक/एक वटा पुस्तक । कोही निहुरिएर पाना पल्टाउँदै थिए त कोही पसिना पुच्दै ।
बाहिर चर्को घाम लागेकाले निक्कै गर्मी थियो त्यहाँ पनि । मञ्चमा आसिनमध्ये एकजना अतिथि ड्यासमा माइक अगाडि उभिएर बोल्दै थिए ।
उनी थिए, झापाका अग्रज पत्रकार चन्द्र भण्डारी । कार्यक्रम रहेछ झापाली श्रष्टा कुमार भट्टराईद्वारा लिखित उपन्याश ‘अश्वत्थामा’को बिमोचन ।
पुस्तकको बिमोचन म पुग्नुअघि नै भइसकेको रहेछ । ‘हिजो अस्तिको मान्छे म भन्दा कान्छो तर, लेखनमा मेरो भन्दा धेरै काम गरेको रहेछ यसले । मैले पत्याएको थिइन ।
पुस्तकको समीक्षा गरिदिनु प¥यो दाई भन्दै आयो’, सुरुवाती दिन सम्झँदै भण्डारीले भने । ‘मान्छे यत्तिको अध्ययनशील र लेखकीय क्षमतामा अव्बल होला भनेर मैले सोचेको थिइन’ ड्यासबाटै भण्डारीले यसो भनिरहँदा मञ्चमा आसिन अतिथि, अग्रज साहित्यकार, गायक गणेश रसिक, साहित्यकार मिश्र बैजयन्ती र लेखक कुमार भट्टराई एकोहोरो हेर्दै सुनिरहेको दृश्य हेर्न लायकको थियो ।
पुस्तकको समीक्षा गर्दै गरेका भण्डारीले साहित्यिक रगत बहेको भट्टराई परिवारबाट जन्मिएको ‘अश्वत्थामा’ उपन्यास अर्को एउटा सुन्दर र गहकिलो कृति भएको टिप्पणी गरे । ‘कृष्ण धराबासी जो साहित्यिक क्षेत्रमा झापामा मात्र होइन देशमै कहलिएको नाम हो’ भण्डारीले भने, ‘त्यस्तो घरानाबाट उनकै भाइले निकालेको यो कृतिले निश्चय नै साहित्यीक आकासमा उल्लेख्य उपस्थिति जनाउने छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।’
कार्यक्रममा अतिथिको रुपमा केही ढिलो उपस्थित भएका कान्तिपुर साप्ताहिकका सम्पादक बसन्त बस्नेतको भण्डारीपछि बोल्ने पालो आयो । उनी युवा पुस्ताका निक्कै अध्ययनशील र पत्रकारितामा खारिएको लेखन भएका पत्रकार÷समिक्षक मानिन्छन् ।
‘म पुस्तकका लेखकलाई त्यत्ति धेरै मजाले चिन्दिन । तर, उहाँले लेखेका केही कृति पढेको छु’, पुस्तकको समीक्षा गर्दै बस्नेतले सुरु गरे, ‘पुस्तकले केही यस्ता प्रश्नहरु उब्जाइदिएको छ, जो अनुत्तरित छन् ।’ उनले भने, ‘युवा पुस्ताले पढ्नै पर्ने पुस्तक आएको छ । म यो पुस्तक सबैलाई एक पटक पढ्ने सल्लाह दिन्छु ।’ यो कृति मदन पुरस्कारको दाबेदार बन्न सक्छ उनले भने ।
हलमा झापाको अलावा दार्जिलिङ, इलाम र मोरङ लगायतका क्षेत्रबाट उपस्थित साहित्यिक श्रष्टा, पत्रकार, शिक्षक र कलाकारको बाक्लो उपस्थिति थियो । बक्ताले गरेको टिप्पणीमा चित्त बुझेपछि बेला बेला हलमा पररर…. ताली पड्कन्थ्यो ।
समिक्षकको टिप्पणी सुनिसकेपछि पुस्तकका लेखक भट्टराईको बोल्ने पालो आयो । अगिपछि विषयवस्तुलाई रमाइलो र ठट्यौली पारेले टिप्पणी गर्ने फस्र्याइला भट्टराईको प्रस्तुति त्यसबेला अलिक फरक र ओजिलो देख्न सकिन्थ्यो ।
शालीन र भद्रशैलीमा प्रस्तुत भएका लेखक भट्टराईले कृतिको त्रुटी औँल्याइदिन आग्रह गरे । श्रष्टाको रुपमा ड्यासमा उभिएर आफ्नो पछिल्लो कृतिबारे प्रष्ट्याउँदै उनले भने, ‘कृतिले धेरै मान्यताहरु भत्काउने भएकाले धेरैको आक्रमण सहनु पर्छ भनेर तयारी गरिरहेको छु ।’ उनले भने, ‘हाम्रा सोचहरु एउटा ‘फर्मेट’मा स्थापित भइसकेका छन् ।
त्यसका विपरीत कुराहरु धेरैलाई पचाउन गाह्रो पर्छ । जसलाई ती मान्यताहरु सही लागेका छैनन्, उनीहरु बोल्न समेत डराउँछन् । किन भने ति कुराहरु धर्म र आस्थामाथिको आक्रमण हुन्छ ।’
उनले कृतिमा समेटिएको अन्तरबस्तुबारे टिप्पणी गर्दै भने, ‘धर्मग्रन्थहरु, वर्तमान सामाजिक परिवेश, राजनीतिक माहोल र महाभारतकालीन ग्रन्थका पात्रलाई अस्वस्थामाले विनिर्माण गरेको छ ।’ कृष्ण धराबासीले लेखेको ‘राधा’ उपन्यासको अन्त्यबाट आफूले अश्वत्थामा लेख्न सुरु गरेको उनले प्रष्ट्याए ।
आफूले कृतिका माध्यमबाट केही मान्यताहरु भत्काउने प्रयास गरेको तर, पु्रस्कारको आशा नगरेको बताए । साहित्यकार बैजयन्तीले पौराणिक मान्यताका बारेमा पुस्तक लेख्नु चानचुने विषय नभएको धारण राखिन् ।
कार्यक्रमका श्रष्टा गणेश रसिकले आफूले कृति पुरा अध्ययन गर्न बाँकी रहेको बताउँदै ठूलो पुस्तकदेखि आफूलाई डर लाग्ने गरेको टिप्पणी गरे । ‘म ठूलो पुस्तक हम्मेसी हेर्ने आँट गर्दिन’, उनले भने, ‘ठूलो पुस्तक पढिसकाउन निक्कै समय खर्चनु पर्छ । तर, यो कृति त्यति ठूलो छैन, म डराउदिन अध्ययन गरेर कमिकमजोरी औल्याउँला ।’ समग्रमा पुस्तक पठनीय रहेको उनको टिप्पणी थियो ।
सांग्रिला बुक्सले प्रकाशन गरेको कृति अग्रज कलाकार रसिक, साहित्यकार बैजयन्ती, पत्रकार भण्डारी र कृतिकार भट्टराईले सामुहिक रुपमा विमोचन गरे ।
प्रकाशकका तर्फबाट मणी शर्माले स्वागत गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन पत्रकार लीला अनमोलले गरेकी थिइन् । कार्यक्रम जयन्द्र भवनको सभाहलमा भएको हो ।
← भरतपुरमा दुई बस ठोक्किँदा २० जना घाइते
विप्लव नेता पौडेलको बर्बर हत्याले पञ्‍चायत कालको याद आयो : जनार्दन शर्मा →